सेयर बजारमा लगानी गर्ने समय आएको छ «
विगत साढे तीन वर्षदेखि निरन्तर घटेको सेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा सुधारको संकेत देखिएका छन् । २०७३ साल साउन १२ गते अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु १८८१ अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) २०७६ मंसिर १० गते ११०९ अंकमा झरेको थियो । गत मंसिरमा १० गते नेप्सेले बनाएको बेस प्वाइन्टबाट बजार पुनः सुधारको गतिमा देखिएको हो । गत मंसिरदेखि सुधारको गतिमा रहेको नेप्से आइतबारसम्ममा आइपुग्दा १३६२ अंकमा पुगेको छ । बजारमा देखिएको निरन्तर उच्च अंकको वृद्धि नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेर दीर्घकालीन लगानी गरेको खण्डमा मात्र पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको उच्च अंकको सुधार टिक्ने देखिन्छ । बजार परिसूचकमा आएको उच्च अंकको वृद्धि मात्र नभई कारोबार रकममा सुधार आएको हुनाले सकारात्मक हुने आधार भने छ । पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि कर्जाको माग घटेको छ । व्यावसायिक कर्जाको माग घटेपछि बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर बजारलाई लगानी क्षेत्र बनाएकाले पनि बजार सूचक सुधारको गतिमा देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानी योग्य रकम भएर पनि लगानी गर्ने क्षेत्र नभएपछि त्यो पैसा सेयर बजारमा आउन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । धितोपत्र दलालको कार्यालयमा नै गएर बैंकहरूले मार्जिन लोनका लागि विज्ञापन गरेका छन् । वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर घट्दो क्रममा हुनु, कर्जा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनु तथा समग्र अर्थतन्त्र पनि विगतका केही वर्षदेखि निरन्तर सुधारको गतिमा हुनाले पनि सेयर बजार सकारात्मक भएको हो । सेयर बजार विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले अब सुधारको विकल्प नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । तर, सेयर बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने खालको वृद्धिले भने स्थायित्व नदिने उनीहरूको तर्क छ । अहिले उच्च अंकले बढाएर नाफा बुक गर्नका लागि ठूला लगानीकर्ताले सेयर आपूर्ति बढाएको खण्डमा फेरि बजार उच्च अंकले नै घट्न जान्छ । सेयर बजार र बैंकिङ क्षेत्र एक–अर्काका परिपूरकका रूपमा रहँदै आएका छन् । बैंकले सहज कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था सेयर बजारले सुधार लिने गरेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजार उकालो लाग्ने गरेको छ । तर, नेप्से परिसूचक अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर घट्ने वा बढ्ने गरेको भने कम नै छ । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारका नीतिहरूले बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा असर गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर उच्च अंकको वृद्धि देखिएको सेयर बजारको सुधार दीर्घकालीन हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
कम्पनीको पिई रेसियो घट्नु भनेको लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो
विगत लामो समयसम्म बियरिस ट्रेन्डमा रहेको सेयर बजार अब बुल ट्रेन्डतर्फ लागेको हो । अब सेयर बजारमा वियर ट्रेन्डको समय पनि सकिएको छ । त्यसका साथै बजार सूचक ११ सयभन्दा तल जान पनि मानेन । यो बिन्दुभन्दा तल लैजानका लागि जानेर नजानेर धेरै प्रयास भए, तर पनि बजार ११०९ भन्दा तल जान मानेन । अहिलेको समयमा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात हेर्ने हो भने धेरै तल आइसकेको अवस्था छ । सूचीकृत कम्पनीको पिई रेसियो घट्नु भनेको लगानी गर्ने उपयुक्त समयको संकेत हो । पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर पनि घटेको अवस्था छ । त्यसका साथै बैंकहरूमा पर्याप्त कर्जा लगानीयोग्य रकम भएकाले पनि सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट सस्तो दरमा सरल रूपमा कर्जा पाएको हुनाले पनि बजार सकारात्मक भएको हो ।
पछिल्लो समयमा सूचीकृत कम्पनीको आम्दानी पनि राम्रो नै छ । सूचीकृत कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि राम्रो रहेको अवस्था छ । सेयर बजारप्रति नकारात्मक भएका लगानीकर्ता पनि लगानी गर्ने समय आएको भनेर बजार प्रवेश गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी प्रविधिक रूपमा पनि १,३५० को बिन्दु पार गर्न नेप्सेले विगत केही सातादेखि प्रयास गरिरहेको थियो । आइतबार नेप्से परिसूचकले १,३६० को बिन्दु पनि पार गरेको अवस्था छ । प्राविधिक विश्लेषणको दृष्टिकोषणबाट पनि बजार बढ्न थालेको हो । पछिल्लो समयमा बिमा कम्पनी र लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी रियल सेक्टरबाट हिमालयन डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य बढेको छ । अहिलेको समयमा बैंकको सेयर मूल्य बढ्नेभन्दा पनि धेरै घटेको देखिन्छ । बैंकको सेयर मूल्य बढ्न थालेको खण्डमा बजार परिसूचकले अर्को नयाँ उचाइ बनाउनतर्फ लाग्छ ।
यो बजारमा नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । आगामी केही दिनमा सेयर कारोबारले सेयर बिक्री गर्छन् । सेयर कारोबारी सेयर बिक्री गर्दा बजार केही करेक्सन हुन सक्छ । बजार आगामी दिनमा पनि करेक्सन हुँदै माथि जाँदै गर्ने हो । आइतबार लगानीकर्ता बैंकिङ र जलविद्युत् क्षेत्रका सेयरमा लगानी गरेको देखिन्छ । यसभन्दा अघि बैंकिङ र जलविद्युत् क्षेत्रको सेयरमा लगानीकर्ता गएका थिएनन् । अहिले पनि बैंकिङ र जलविद्युत् क्षेत्रका अधिकांश सेयर अन्डर प्राइस छ । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रूपमा चक्रीय प्रतिफल लिनका लागि अहिले पनि बैंकिङ र हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा वृद्धि जोखिमयुक्त छैन । सेयर बजार परिसूचक १० देखि १५ अंकले बढेको अवस्थामा पनि सानो अंककै भए पनि करेक्सन हुँदै अघि बढेको छ । विगत लामो समयदेखि घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजार अहिले विस्तारै सकारात्मक हुँदै आएको छ । बुलिस ट्रेन्डमा वियरिस ट्रेन्डमा नकारात्मक भएको कुरा सकारात्मक हुन जान्छ । वियर ट्रेन्डमा हकप्रद तथा बोनस सेयर आएको समयमा पनि लगानीकर्ता सेयर बिक्री गर्ने गर्छन । तर, बुलिस ट्रेन्डमा हकप्रद तथा बोनस सेयरका लागि नै लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्ने क्रम देखिएको छ ।
बजारमा बुलिस ट्रेन्ड सुरु भयो भनेर खराब कम्पनीमा पनि हौसिएर लगानी नगर्न सुझाव दिन्छु । बजारमा बढ्न थालेको छ । यो अवस्थामा कम्पनीको विश्लेषण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अहिले जलविद्युत् र बैंकिङ क्षेत्र धेरै नै सुस्त छ । यो क्षेत्रका कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको खण्डमा कुनै पनि हालतमा घाटा हुँदैन । यो क्षेत्रका कम्पनीको सेयर मूल्य सार्वजनिक निष्कासनमा भन्दा दोस्रो बजारबाट सस्तो मूल्यमा पाइएको अवस्था छ । यी क्षेत्रका कम्पनीले दिने लाभांशले पनि ब्याज तिर्न पुग्ने अवस्था छ ।
सुरुका चरणमा अर्थमन्त्रीले बजारप्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएकै हो । अहिले बजार घटेर न्यूनतम विन्दु बनाइसकेको अवस्था छ । लगानीकर्ताले पनि बैंकको ब्याज तिर्न तयार भएर तर सेयर बिक्री गर्न तयार भएनन् । त्यसले गर्दा पनि बजार थामिएको हो । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थाल्नुभएको छ । पहिला लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री परिवर्तन नहँुदासम्म बजार नबढ्ने भन्ने थियो । तर, अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीले पनि सेयर बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय आएको भन्दै गरेको अवस्था छ । त्यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले पनि बजारलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ । विगतमा भएका नकारात्मक कुराहरू अहिले आएर सकारात्मक हुन थालेको हुनाले पनि बजार बुलिस ट्रेन्डतर्फ लागेको देखिन्छ । सबै क्षेत्र सकारात्मक भएकाले पनि बजार अब पहिले जस्तो तल जाँदैन ।
सकारात्मक अवस्थामा सेयर बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण छैन
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगतमा दिनुभएका सेयर बजारसँग सम्बन्धित अधिव्यक्ति र अहिलेमा धेरै फरक छ । सेयर बजारप्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने अर्थमन्त्री अहिले आएर कसरी त्यही क्षेत्रलाई सकारात्मक भन्नुभएको हो । त्यसमा लगानीकर्ता पनि अन्योलमा छन् । तर, उहाँले अहिले सेयर बजाररमा लगानी गर्ने समय हो, सेयर बजार बढ्छ, सेयर बजार सधंै घट्ने मात्र हुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ । अन्य क्षेत्र सकारात्मक भइरहेको अवस्थामा सेयर बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण छैन भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्दै आउनुभएको छ । सेयर बजार घट्नु यो क्षेत्रमा बजार घटाउने तत्व सक्रिय भएको हुनाले बजार पनि नबढेको भन्ने खालका भनाइ अर्थमन्त्रीका आउन थालेका छन् ।
सुरुका चरणमा अर्थमन्त्रीले सेयर बजार सीमित व्यक्तिको हातमा छ । यो बजारलाई विस्तार गरेर गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । भित्तामा हेरेर चुरोट तानेको भरमा पैसा कमाउन पाइन्छ ? पैसा कमाउन मेहनत गर्नुपर्छ, दिमाग चाहिन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीबाट आएकै हुन् । अहिले अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यअवधि सक्किन लागेकाले धेरैलाई किन चिड्याउने भन्ने भए पनि सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको हुनसक्छ । अहिले बजार बढ्नुमा २५ प्रतिशत भूमिका अर्थमन्त्रीकै छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा नियुक्त हुनुभएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट बजारप्रति सकारात्मक कुरा बाहिर ल्याउनुभएका कारण पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढेको हो । हामीले धितोपत्र बजार बढ्नुपर्छ भनेर भनेका होइनौं । हामीले पुँजीबजारको विकास हुनुपर्छ भनेका हौँ । अहिलेका अध्यक्षले पनि पुँजीबजार विकासका लागि उपयुक्त कदम चाल्ने योजनामा रहेको हुनाले पनि लगानीकर्ता सकारात्मक भएका हुन् । सेयरको मूल्य बढ्नुपर्छ भन्दा पनि सेयर बजार सिस्टममा हुनुप¥यो भन्ने लगानीकर्ताको भनाइ हो । सेयर बजार घट्नु बढ्नुभन्दा पनि प्रणालीको विकास गरेको खण्डमा बजार घट्यो वा बढ्यो भन्ने कुराले भूमिका राख्दैन । जस्तो सेयर धितोमा दिइने कर्जाको विषयमा, अनलाइन कारोबार प्रणालीको विषयमा सिस्टम नै विकास गरेर एकरुपता ल्याउनु जरुरी छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा सेयर बजार सुधारको सञ्जीवनी बुटीका रूपमा काम गर्न सक्छ ।
त्यसका साथै टी प्लस थ्रीलाई, टु, वान गर्दै रियल टाइम सेलमेन्टको व्यवस्था गर्नेसम्मको विषयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले चासो दिएको देखिन्छ । यसका लागि अन्य विषयहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा तयारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने समयको सोचाइ बोर्डका अध्यक्षसँग रहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढेको अवस्था हो ।
दोस्रो बजारमा बुल ट्रेन्ड सुरु हुनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य बढ्नुपर्छ । सबै लघुवित्तलाई जोड्दा पनि एउटा कमर्सियल बैंकको सेयरजति पनि छैन । त्यसैले सानो आकारमा सेयर भएका कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दैमा बजार बुलतर्फ नै लाग्यो भन्न सकिँदैन । समग्र पुँजीबजारको सुधारका लागि बैंक वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा सुधार नभई सम्भव छैन ।
निक्षेप राखेर ब्याज खानभन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्दा प्रतिफल धेरै
सेयर बजार चक्रमा चल्छ भनिन्छ । अहिले सेयर बजारले घट्ने क्रमको चक्र पूरा गरेको अवस्था हो । हाम्रो सेयर बजारमा बुलिस ट्रेन्ड भनेको राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको छ । नेपाली सेयर बजार सात वर्षको चक्रमा चलेको देखिन्छ । यसमध्ये तीन वर्ष घट्दो क्रममा रहने र बाँकी चार वर्ष बढ्दो क्रममा हुने गर्छन् ।
घट्दो क्रममा करिब समाप्त भएको तथा अर्थमन्त्री आफैंले पनि कम्युनिस्ट सरकार आएर पनि सेयर बजारलाई असर गर्दैन भनेर भन्न थालेको अवस्था छ । विगतमा जस्तै अहिलेको समयमा पनि करिब ११ सयको बिन्दुमा धेरै समय रहेको बजार अहिले पुनः माथि लागेको छ । तर, अहिले बुलिस आउनलाई भने गाह्रो छ । सेयर बजारको चक्रअनुसार चार वर्ष बढ्दो क्रममा रहने भन्दै गर्दा मुख्य बुलिस भनेको ६ देखि ९ महिना मात्र आउने गर्छ । यो समयमा नेप्से करिब ५० प्रतिशतले माथि जाने गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले नै बजारले नयाँ उचाइ बनाउँछ भन्ने होइन । बजार विस्तारै सुधारको गतिमा देखिएको छ । तर, नयाँ उचाइ बनाएर अघि बढ्न अझैं समय लाग्छ ।
अहिले बजारमा आएको सुधार कहिलेकाहीं सेन्सेटिभ इन्डेक्स घटेर पनि नेप्से सूचक बढेको देखिन्छ । त्यसैले पनि धितोपत्र बजारले नयाँ उचाइ बनाउनका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा बुल आउनुपर्छ । अहिलेको समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल बुल आउन सहज भने छैन । सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अत्यधिक बढेको छ । समग्र सूचक करिब २० प्रतिशतले पनि बढेको छैन । तर, केही कम्पनीको सेयर मूल्य शतप्रतिशतले बढेको अवस्था छ । बैंकिङ समूहको सूचक १० देखि १५ प्रशितले मात्र बढेको छ । सानो पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्य कर्नरिङ गरेर बढाएको अवस्था छ ।
सेयर बजारमा बुल र बियर प्वाइन्ट बनाउँदा यति नै प्रतिशत घट्ने र बढ्ने भन्ने हुँदैन । पहिला यतिले घटेको थियो, अहिले पनि सोही क्रम कायम हुन्छ भन्ने हुँदैन । समय बित्दै जाँदा बजारमा कम्पनी थपिएका हुन्छन् भने सूचीकृत कम्पनीले दिने लाभांशमा पनि परिवर्तन भएको हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि बजारको घटाइ र बढाइको मापन विगतको जस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन । नयाँ लगानीकर्ता थपिएका हुन्छन, नयाँ आधार बनेको हुन्छ, दिन–प्रतिदिन सूचीकृत कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन पनि राम्रो हुँदै जान्छ ।
बैंक–वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा आउने प्रतिफल भन्दा सेयर बजारबाट आउने प्रतिफल धेरै पाउने अपेक्षा हुन्छ । सेयर बजारमा लगानी गरेको अवस्थामा क्यापिटल गेन भएको अवस्थामा फाइदा भइहाल्यो । त्यसका साथै कम्पनीले दिने प्रतिफलबाट पनि आम्दानी हुने भयो । त्यसैले निक्षेप राखेर ब्याज खानभन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्दा हुने प्रतिफल धेरै हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा पनि बजार सकारात्मक हुन जान्छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको अवस्था छ भने सहज कर्जाको उपलब्धता भएकाले पनि बजार सकारात्मक हुनमा मद्दत गरेको हो ।